Realzụ ahịa ụlọ ahịa n'ịntanetị abụrụla | Martech Zone
Monday, July 6, 2009 Tuzdee, Machị 1, 2016 Douglas Karr
Industrylọ ọrụ Real Estate agbanweela ụfọdụ nnukwu mgbanwe site na ụlọ afụ (buru amụma ebe a), mgbanwe teknụzụ, na nchịkwa ọzọ nke ọchụchọ n'ịntanetị. The afụ nakwa dị ka ịrị elu na incredibly miri ọdịda nke nnyefe ahịa amanye ezigbo ala na ụlọ mmadụ ịkpachara anya na ha ahịa investments.
Teknụzụ agbanweela. Mobile mwekota na teknụzụ dị n'ịntanetị na-enye usoro nke na-enye ndị na-elekọta ụlọ ezigbo ngwa, gụnyere njegharị ụlọ nke ezigbo ala, njegharị ala nke ụlọ, mobile na njegharị ala ụlọ. Usoro ndị a adịghị ọnụ maka onye na-ahụ maka ụlọ ala afọ ole na ole gara aga - ndị nnọchi anya ga-ejikọta ikike na asọmpi ndị ọzọ karịa ịnwe ngwa ahụ n'onwe ha.
Ọbụna Google nwetara na Real ala na ụlọ egwuregwu ikpeazụ May. Enwere ike itinye ndị ọrụ na ihe ha nwere na Google Maps Real Estate. Pịa njikọ Nhọrọ Nhọrọ njikọ aka nri nke bọtịnụ Maapụ Search ma ndepụta ndọpụta ga-apụta. Họrọ Ahịa ịre ụlọ ị ga-enweta ngwa ngwa siri ike:
Ihe karịrị 56% nke nyocha Internetntanetị niile na "ezigbo ala" na okwu metụtara ya na-eduzi na Google na saịtị ndị mmekọ ha, dị ka Google si kwuo. Usnweta data na Google nwere ike tinye aka na ya Ihe Ntọala Google Base Google.
Tags: google base data apigoogle +searchchọta ụlọezigbo ala na ụlọahịa ịre ụlọmebere njem
Julaị 7, 2009, elekere 7:38 nke ehihie
Naanị otu ihe m ga-ekwu maka ya - ma ọ bụghị ọmarịcha nkọwapụta: SMS na-abawanye uru na oghere ezigbo ụlọ mkpanaka. Ojiji na-arị elu ma na-arịgo, na mgbe ejikọtara ya na webụ mkpanaka, atụmanya na ndị ọkachamara RE na-enweta n'ezie ihe kacha mma nke teknụzụ ahịa ọgbara ọhụrụ. Oh, na m na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-eme nke a. B)